トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Sahaminta guul sahlan si ay u qaabeeyaan ka xaaladda gelinaya qowladda pachinko ciidamada
In tii pachinko, muuqan wax soo saarka si la mid ah sida warshadaha kale, ie, waxaa jira model ah talinayaa. Sidee ku talinaynaa doonaa model ah waa ka duwan yahay in kasta qowladda pachinko ah, halkaas oo wixii computer lagu daydo, waxaan eegi doonaa sida ay u aheed in model ah talinayaa ee dukaanka.
Sida loo aqoonsado sida ugu fiican ee model lagu taliyey waa mid aad u fudud. Tani waa, waxa ay u muuqataa in ay sida aad ku samayseen wax caadi ah in kasta oo tii pachinko. First of dhan, ka soo galo hore qowladda pachinko ah, eegno model ah oo uu soo rakibay meel ay si sahal ah ugu arki karaa. Haddii lagu daydo kale ka badan tahay tirada Xintai ee model waa ballaadhan yahay, waa model ah boor aan model waa ay qaldan tahay.
Intaa waxaa dheer, bedelka Xintai waaweyn, iwm, in ay dhacdo bandhigid tiro badan ka mid ah tirada waa, in aad rabto in aad ku rakibi ah mashiinada cusub ee meesha this. dekedda Front, waa meesha macaamiisha la socda ay soo booqdaan ee ugu weyn. Ujeedada in, lagu daydo in ay ku riday ciidamada ugu haatan qowladda pachinko ah, waxaa lagu qori ku jira meesha ugu tageen waxa uu noqday mid caadi ah.
ee warshadaha kale, lagu talinayaa in wax soo saarka ku yeelanayso qaab keenay meel u dhow meesha laga galo, waxa ay noqon doontaa in ku sameynayaan xaaladda la mid ah sida wax. Sidoo kale u dhow meesha laga galo oo ka mid ah boodhadhka iyo POP aynu eegno. Habka ugu dhow
furitaanka hore, POP, iwm si ay u abaari jira waa in ku dhowaad oo aan laga reebo. Waxaa loo xiraa in meesha ugu tageen ah tusaalayaasha boor iyo ku dayashada ugu dambeeyay, waxaa laga yaabaa in fikrad fiican in la xasuusto sababtoo ah waa xeerka dahabka. In model ah, kaas oo diiradda saarayaa model aan boor iyo Xintai waa, ka hadlaya haddii ay la dhigayaa meel kasta, in aad ku rakiban-baxay meel u dhow albaabka dambe, waxaan inta badan waxa loo xiraa dambe ee koorsada.
ka hadlayay sababta, meel u dhow albaabka dib u leeyahay gelitaanka iyo ka bixitaanka ee macaamiisha, waa si ay u abaari dadka u galaya albaabka dib ugu daydo magaabo-talinayaa u yimid. The martida booqashada ka furitaanka hore laaluusheen inay la soo wareegto model iyo Xintai, macaamiisha soo galaan dukaanka ka soo albaabka danbe, socodka in xaadiriyaan ah lagu daydo ee quseyo talinayaa waa guud.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xaalad ah in in lagu daydo gaar ah ee quseyo talinayaa, soo celin koorsada. Waxaana looga gol leeyahay, la galo dhow oo keliya ma aha, waxaan, si sida ay u siman lifaaq qalliin dukaanka oo dhan. Haddii la orod ah oo ka mid ah model dhabarka calaamadeeyay, waxaa u soo baxay hawlgalka yaab iyo tusaalayaal kale. In aan lagu rakibay si loogu isticmaalo ee saamaynta induction ah.
Intaa waxaa dheer, xataa haddii aad ku adkeeyey ah lagu daydo ee quseyo talinayaa in dhabarka, si loo hubiyo in albaabka hore iyo dib u furitaanka hore, waa inuu jiraa POP ah. Marka dukaanka, waxaad ka heli doontaa dukaamo wanaagsan xaaladda iyo siin caado ka had iyo jeer u fiiriyaan POP iyo boodhadhka. Sidaas, meesha lagu daydo ah, marka la eego qiyaasta ku caan ah oo ku hardiyi heerka uu ku qowladda pachinko u tahay cunsurka ugu wayn.
model ah in ay ku riday dukaanka waa ciidan ka baxsan Xintai, sababtoo ah waxaa jira waqtiyo dhidibkii uu noqday macaan, fadlan fiiri by dhan waxaa loola jeedaa jeeg. From Cafiyi wax yar oo dhan, marka ay galayaan dukaanka, laakiin waxa aad ayaa lagu talinayaa maanta, dukaamada, sida joogta ah in haddii ay u saaray ciidan isla markiiba Muuqda.